Camtinerary Trip Planner, yemahara kwenguva shoma | IPhone nhau
Camtinerary Trip Planner, yemahara kwenguva shoma
Asati auya emafoni emafoni uye ezvitoro zveapp, isu vedu avo vaigara vachifamba vaifanira kutendeukira kunzira dzinodhura dzekufamba kuti vasarasikirwa zvachose. Dambudziko ratisina kuwana kana tichifamba kubva kune imwe nzvimbo kuenda kune imwe tichitevera ipfupi uye inokurumidza nzira uye izvo zvakare zvakatibvumidza isu kuti tione inonakidza yeguta riri kutaurwa. Asi nekuda kwemafoni efoni uye zvinoshandiswa zvakagadzirirwa vafambi vazhinji, tinogona kuzvishandisa se chishandiso chimwe chete kuronga kwedu nzendo nguva dzese, tichiverenga nguva dzese nguva yatichazoshandisa kufamba, kungave netsoka, nebhazi, nemotokari ...
MuApp Store tinogona kuwana maapplication akati kuti anozobatsira mune iri basa, asi nhasi tiri kutaura nezveCamtinerary Trip Planner, chishandiso chatinogona kurodha pasi kwenguva yakati rebei muApp Store uye ine mutengo wenguva dzose we4,99 euros. Nekuda kwechikumbiro ichi isu tichakwanisa kuronga mafambiro edu kuenda kune diki diki, tichiziva nguva dzese nguva yatichazoshandisa kusvika kumasayiti, kuitira kuti tishandise zuva zvakanyanya sezvinobvira. Zvakare, kana iwe uri mushandisi weApple Watch, iwe uri muhombe nekuti Ichi chishandiso chinoenderanawo neAppl smartwatche, izvo zvinotidzivirira isu kuti titore iyo iPhone nguva dzese kuti tizive kwatinofanira kuenda.
Ichi chishandiso chinoda angangoita iOS 10 uye inowanikwa zvizere muSpanish. Kana iyo skrini ye iPhone yedu iri diki kwazvo, tinogona kuishandisa neIpad yedu pasina dambudziko. Camtinerary Rwendo Kuronga inowana rwakawanda ruzivo irwo rwunotiratidza kubva kubasa kubva kuYelp, Foursquare, Expedia, Michelin uye Trip Advisor, ruzivo rwunowedzeredzwa nemifananidzo kubva kuFlickr neGoogle Street View. Izvo zvinoenderanawo nemamiriro ekushambadzira mamiriro akaita seWaze, Google Mepu, Citymapper, Apple Mepu uye Yandex. Sezvauri kuona, iyi application yakagadzirirwa kuti igone kushandisa zvizere zviwanikwa zvese izvo internet zvinoita kuti zviwanikwe kwatiri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Camtinerary Trip Planner, yemahara kwenguva shoma
Iyo Apple Tarisa Nike +, nyeredzi yemhando dzakasiyana dzemavhidhiyo anonakidza
Android ndiyo yaive yakanyanya kunetseka OS muna 2016